Anyị nyochara igwefoto egwuregwu VicTsing, ngwaọrụ pụtara ìhè na ọnụego belatara | Akụkọ akụrụngwa
Egwuregwu ma ọ bụ kamera ime ihe na-aghọwanye ewu ewu ma ọ na-abụwanye ihe a na-ahụkarị ka ọtụtụ ndị na-edekọ egwuregwu egwuregwu ha ma ọ bụ ihe ọ bụla batara n’otu n’ime ngwaọrụ ndị a. N'oge na-adịbeghị anya, ahịa jupụtara na nsụgharị dị iche iche na ụdị dị iche iche nke igwe foto ndị a, nke anyị nwere ike ịchọta na ahịa maka ọnụahịa dị ala. Nke a bụ ikpe nke Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. na taa anyị ga-enyocha n'ụzọ zuru ezu mgbe anyị nyochachara ya maka ụbọchị ole na ole.
Tupu ị banye nyocha ahụ, ọ dị mkpa ikwu okwu ahụ na price bụ nnọọ ala na-eme ka ọ na oké ọnụ ngwaọrụ maka onye ọ bụla. Site na igwefoto egwuregwu a, ị gakwaghị enwe ihe ngọpụ iji dekọọ usoro ịnyịnya ígwè gị ma ọ bụ chebe ncheta njem gị niile.
2 Main Atụmatụ na nkọwa nke VicTsing Sports Camera
4 Iguzozi na ahụmịhe na igwefoto egwuregwu a
Otu n'ime ihe na-adọrọ mmasị nke ngwaọrụ a bụ imepụta ya ma ọ bụ nke nwere pere ezigbo mpe ma mara mma ma mara mma, anyị nwere ike iwere igwefoto a ebe ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa ka anyị tinye ya na ngwa nke na-enye anyị ohere ịme ya mmiri, anyị nwere ike zoo ya na-enweghị nsogbu ọ bụla n'aka anyị ma nwee ike ịse foto ọ bụla na oge ọ bụla.
N'ihi ngwa ngwa nke ọ webatara, nke bụ nke zuru oke, yana ị nwere ike ịhụ na onyonyo dị n'okpuru, anyị nwere ike mikpuo igwefoto egwuregwu a n'okpuru mmiri, itinye ya na mkpịsị osisi selfie ma ọ bụ na njem ị nwere maka igwefoto gị foto nke ndụ. A gụnyere ngwa ngwa a na ọnụahịa nke igwefoto na enweghị obi abụọ ọ ga-enye anyị usoro nhọrọ nke n'ọtụtụ ọnọdụ ngwaọrụ ndị ọzọ dị n'ụdị a anaghị enye anyị.
N'ikpeazụ, anyị ga-agwa gị gbasara imewe ahụ, maka nrụtụ aka gị, na ọ dị ka ngwaọrụ ndị ọzọ nke ụdị a na ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla n'itinye ya n'ụzọ dị mfe n'ụgbọ ala gị, na igwe gị ma ọ bụ ihe ọ bụla ị nọ i nwere ike na-eche nke. Iji nye gị echiche, na VicTsing ha echegoro ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla ị nwere ike ịchọrọ igwefoto egwuregwu gị na ngwa ndị ahụ gụnyere eriri eriri ole na ole ka ị wee nwee ike ịkwanye igwefoto ahụ na ihe ọ bụla ị nwere ike ịchọrọ.
Main Atụmatụ na nkọwa nke VicTsing Sports Camera
Ọzọ anyị ga-enyocha ihe isi atụmatụ na nkọwa nke igwefoto egwuregwu VicTsing;
Incorporates a 2-anụ ọhịa LCD ihuenyo HD mkpebi
Igwefoto nwere ihe mmetụta 12 megapixel nke na-enye gị ohere iwere onyonyo dị elu ma dekọọ vidiyo na Full HD (1.080p) na 30fps. Ike ịgbanwe ISO, ikpughere ụgwọ, nguzo ọcha, ma ọ bụ nkọ onyonyo
Ndekọ na 1080p na 30fps
Ndekọ 720p na 60 fps
Ndekọ 720p na 30 fps
Lens nwere mkpuchi 6 nke kristal nke na-enye gị ohere iwere foto doro anya ma dị nkọ. Ekwe omume nke iji fisheye na incorporates
Dị ka ọtụtụ igwefoto egwuregwu, ọ bụ mmiri na-eguzogide mmiri na mmiri, nke na-enye anyị ohere iwere ngwaọrụ a ebe ọ bụla na ebe ọ bụla. Anyị nwere ike ịse foto ma dekọọ vidiyo ruo omimi nke mita 30
Njikọ WiFi nke ga-enye anyị ohere, n'etiti ihe ndị ọzọ, iji nyefee ihe oyiyi na vidiyo na ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka ama ma ọ bụ mbadamba. Nakwa ekele na ngwa ikpeazụ Cam, anyị nwere ike ijikwa ngwaọrụ a, nke nwere ike ịmasị ịchịkwa, dịka ọmụmaatụ, anụ ụlọ anyị mgbe anyị na-anọghị n'ụlọ.
Nchekwa dị n'ime sitere na kaadi microSD nke na-agụnyeghị igwefoto yana na anyị ga-azụrịrị iche
Nnukwu ngwa nke ngwa ndị etinye n'ime igbe ngwaọrụ n'onwe ya
Ugbu a oge eruola ịlele ogo nke igwefoto egwuregwu a na-enye anyị na maka nke a anyị na-egosi gị foto ole na ole ejiri ngwaọrụ a na taa anyị na-edo onwe anyị n'okpuru nyocha na vidiyo ole na ole ị ga-enwe ike nyochaa ọtụtụ ihe;
Iguzozi na ahụmịhe na igwefoto egwuregwu a
Onye ọ bụla hụrụ inwe ike idekọ ahụmịhe ha kwa ụbọchị ma ọ bụ ihe nkiri kwa ụbọchị na igwefoto egwuregwu, mana ọ dị nwute n'ọtụtụ oge ngwaọrụ ndị a nwere ọnụahịa dị elu. N'ihe banyere igwefoto a, ọnụahịa ya dị ala, ọ bụ ezie na o doro anya na àgwà ya kwekọrọ na ya.. Na ihe anyị na-akwụ maka ngwaọrụ a anyị enweghị ike ịtụ anya karịa ihe ọ na-enye anyị.
O doro anya na ogo nke onyonyo ma ọ bụ vidiyo, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe anabatara, dị anya na ihe igwefoto ndị ọzọ na-enye anyị, nke na-eme ka ọnụahịa nke ngwa VicTsing a dị ọtụtụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka igwefoto a jiri oge obi ụtọ na-edekọ ihe niile ị nwere ike iche, ọ ga-ezuru ya, ọ bụ ezie na ịchọrọ ịnye ya ọkachamara karịa, dịka ọmụmaatụ, ị kwesịrị ịchọ ngwaọrụ ọzọ nke na-enye anyị ogo dị elu .
N'ikpeazụ, m nwere ike ịkwụsị ikwu okwu ọzọ banyere ngwa ngwa nke ngwaọrụ ahụ gụnyere na nke ahụ bụ na ya na ị nwere ike ịme ihe ọ bụla ịchọrọ igwefoto. Ọtụtụ ese foto nke ụdị a anaghị agụnye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa ndị VicTsing ngwaọrụ na-eme.
Nke a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. nwere ike zụrụ site Amazon na ụgwọ taa guzoro euro 69.99, nke na-anọchite anya mbelata nke ego mbụ nke euro 40. Nnweta bụ ozugbo na otu uru dị ukwuu nke ihe anyị nwere ike inweta site na ụlọ ahịa a na-echekwa nke Jeff Bezos kere bụ na anyị nwere ike ịnata igwefoto n'ụlọ anyị na 24 awa.
VicTsing igwefoto egwuregwu
Ogo nke foto na vidiyo e
Kedu ihe ị chere maka igwefoto egwuregwu VicTsing a site na ihe ị hụrụ ma nwee ike ịgụ na nyocha anyị?. Gwa anyị na oghere edebere maka nkọwa nke post a ma ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma ịnwe ngwaọrụ a, gwa anyị gbasara ahụmịhe gị na ya mgbe ị na-edekọ ma na-ese foto.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Anyị na-enyocha igwefoto egwuregwu VicTsing, ngwaọrụ pụtara ìhè na ọnụahịa belatara